Idaacadda Subaxnimo - Worldnews.com
Idaacadda Subaxnimo ee Saaka iyo Caalamka waxaad ku maqashaa wararkii habeenimadii xalay ka
Idaacadda Fiidnimo ee Evening Edition waxaad ku maqashaan wararkii ugu danbeeyey ee Soomaaliya iyo Caalamka, barnaamijyo iyo wareysiyo ka turjumaya dhacdooyinka waqtigaasi...
Voa News 2020-02-01
Idaacadda Duhurnimo waxaad qeybta hore ku maqli kartaa wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya iyo Caalamka. Qeybta danbe ee idaacaddu waxay idiin soo gudbinaysaa barnaamijyo ku saabsan dhalinyarada maanta. ......
Madaxweyne Farmaajo oo "xoojiyey" tuhun laga qaday dowladiisa
MUQDISHO, Soomaaliya – Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa aaminsan in caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa ay xarun u noqotay siyaasadda arrimaha dibadda dowladda Farmaajo. Hadalkaan ayuu sheegay xili uu wareysi siinayay Telefishinka maxaliga ah ee Universal, kaasoo la baahiyey habeenimadii xalay. Hogaamiyaha xisbiga Wadajir ayaa ka dhawaajiyey hadaladaas isagoo ka...
$7,000 oo doolar ayuu ku soo galay garoonka ay ciyaarta ka socotay, wuuna iska seexday
Maalintii Axadda, nin taageere kubadda cagta ah ayaa dad badan ka yaabiyay ka dib markii uu ku seexday kursigiisa, xilli ay socotay ciyaar aad u xiiso badan oo ka dhaceysay dalka Mareykanka. Arrinta la yaabka leh waxay ahayd in ninkani uu galitaanka garoonka ay ciyaartaas ka dhaceysay ku bixiyay lacag dhan $7,000 oo doolar, ka dibna uu iska seexday ciyaarta oo qeybihii ugu...
“Somaliland Waxanu soo galiney Computerkii Caalamka “ Sh Yusuf illaa Faratoon! Bal dib iila milicsada Sannadkii 1992 oo aan idin xasuusiyo dhacdo aan filaayo in aad idinkuna xasuusan doontaan. Goobtu waxay ahay Khayriyada badhtamaha Hargeysa, waa cabaaro 10:00 Subaxnimo, waxaa jirey khudbado ay ummadda Reer Hargeisa u jeedinayeen qaar kamid ah wasiiradii Xukuumadii AHN Marxuum...